Akhriso:-Khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay muqdisho | dayniiile.com
Home WARKII Akhriso:-Khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay muqdisho
Akhriso:-Khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay muqdisho
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo Maanta barqadii Ciidamo katirsan kuwa Millateriga Soomaaliya lagula eegtay inta u dhaxeya Aargada Degmada Deeyniile & Xaafada Siisi.
Qaraxa ayaa qabsaday gaari Prado ah oo ay wateen ciidamada Milalteriga, waxaana goobjoogayaal sheegay in qaraxa uu ku dhintay Askari halka ay ku dhaawacmeen Saddex qof oo labo kamid ah yihiin Shacab.
Ciidamo katirsan booliska degmada Deeyniile ayaa tegay halka uu qaraxa ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka qaaday dadka ku dhaawacmay qaraxa sidoo kalena muddo kooban xiray Aaga uu qaraxa ka dhacay wallow markii dambe ay dib u fureen.
Maamulka degmada Deeyniile iyo laamaha Amniga degmadaas ayaan weli ka hadlin, waxaana qaraxa uu kusoo eegmay xilli xalay ciidamada ammaanka ay howlgallo la xiriiray dhanka Amniga ka sameeyeen Xaafado katirsan degmadaas.
Previous articleSAWIRO:-Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday Xerooyin kuyaalla Baydhabo
Next articleMaxay ka wada hadleen Ergeyga gaarka ah ee Abaaraha & Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya?
Ra’iisul wasaare Rooble oo mar kale la kulmay Sheikh Maxamed Bin...
Yemen’s new leader, Abdullah Al-Alimi, has issued a warning to the...
Xisbiga Kulmiye: Xukuumada Kulmiye uma qarsoona dariiqyo lagu hor istaagayo doorashooyinka